Ibhande elingenazandla | Izinja Umhlaba
Cabanga ukuthi kufanele uthathe inja ukuhamba. Kepha lena inkulu, futhi wesaba ukulimala engakubangela ezandleni zakho uma kufanele udonse iketanga njalo kabili ngantathu, noma ukuyimisa noma ukuyenza ihambe. Awucabangi ukuthi kulezo zimo a ibhande elingenazandla?
Lolu hlobo lwezesekeli luvame kakhulu kwezemidlalo, njenge-canicross, kepha iqiniso ukuthi lingasetshenziswa usuku nosuku. Manje, iluphi ibhande elihle kakhulu elingenazandla emakethe? Yini okufanele uyicabangele lapho uyithenga? Isetshenziswa kanjani? Sizophendula yonke le mibuzo engezansi.
1 Imichilo engcono kakhulu engenazandla
2 Yini ibhande elingenazandla
3 ICanicross, lo mdlalo owenza imichilo engenazo izandla ibe yimfashini
4 Ungayikhetha kanjani kahle intambo engenazandla
4.1 Usayizi wenja
4.2 Nweba ubude
4.3 Izengezo ezingeziwe
4.4 Izakhi ezibonisa
5 Ungayisebenzisa kanjani intambo engenazandla
6 Ungayithenga kuphi leash ukuze ugijime nenja
Imichilo engcono kakhulu engenazandla
I-Cadrim Dog Leash, ...
I-Dog Leash ...
Yini ibhande elingenazandla
Singachaza amabhande ezandla aboshiwe njenge- ibhande elibekwe okhalweni futhi okuphuma kulo ibhande elixhunywe enjeniKungaba ku-harness yakho noma kukhola.
Ngale ndlela, isilwane siphethwe yithi kepha, ngasikhathi sinye, sishiya izandla zombili zikhululekile. Uma isilwane sidonsa, singasinqanda ngokufaka ingcindezi ngawo wonke umzimba, hhayi ngesandla noma izandla kuphela, sigweme izifo ezihlakaleni ezingathi ngokuhamba kwesikhathi zibe zimbi kakhulu.
Iningi lalezi zintambo liyashintsheka, ngendlela yokuthi livumelane nesinqe sanoma yimuphi umuntu. Zisetshenziswa kabanzi kwezemidlalo njengensiza yokuzijwayeza, phakathi kokunye, i-canicross, umdlalo wemfashini.
ICanicross, lo mdlalo owenza imichilo engenazo izandla ibe yimfashini
Izandla Zemichilo Yamahhala ...
ICanicross ngumdlalo othola abalandeli abaningi ngokwengeziwe ngokwenza inqubo ehambisana nesilwane sakho. Lokhu yilokho inja nomnikazi bagijima kanyekanye, balinganisa omunye nomunye, futhi ngesikhathi esifanayo besizana.
Ngalokhu, iqukethe i-leash engenazandla ihlanganiswe ne-canicross harness kanye ne-strap elastic evumela ukuthi inja inamathiselwe kumnikazi wayo futhi zombili zingagijima ngokukhululeka. Ngakolunye uhlangothi, abantu bayazuza emandleni ezinja, ngokuziphoqa ukuba zilandele isigqi sazo. Ngakolunye uhlangothi, inja iyazivocavoca ngokudonsa umuntu, ngasikhathi sinye lapho isungula khona isibopho nomnikazi wayo.
Akudingekile ukuthi ucabange inqubo ejwayelekile yobungcweti noma ephakeme, kepha futhi kungaba ukuhamba nsuku zonke noma ukugijimisana nenja yakho, ngaleyo ndlela wabelana isikhashana lapho inja nomnikazi kufanele babe munye.
Ungayikhetha kanjani kahle intambo engenazandla
Manje njengoba usunombono wokuthi iyini le bhande elingenazandla, kungenzeka ukuthi usibonile isisombululo kuso. Noma ngabe ufuna ukuhambahamba nenja yakho ugcina izandla zakho zikhululekile ukwenza ezinye izinto nazo; Noma ufuna ukuzijwayeza i-canicross noma omunye umdlalo, le ngxenye kungenzeka kube yilokho obukufuna.
Manje, akulula njengokuya esitolo nokuthenga eyokuqala oyibonayo. Kuyadingeka ukuthi ucabangele izici eziningana ezizokwenza ukhethe imodeli eyodwa noma enye.
I-leash engenazandla ayifani nenja enkulu yokuzala njengethoyizi. Hhayi ubukhulu besilwane ngasinye kuphela, kodwa futhi namandla abangaba nawo. Ngalesi sizathu, lapho ukhetha eyodwa kufanele ukhumbule uhlobo lwenja oyifunayo, ikakhulukazi ngoba, kulokhu, okufanele uvikelwe ekulimaleni nguwe.
Elinye iphuzu okufanele ulinakekele "inkululeko" ozoyinika inja yakho. Lokho kusho ukuthi, uma uzomvumela ahlukane nawe kakhulu noma cha. Imvamisa zivunyelwe phakathi kwemitha elilodwa kuya kumamitha amabili ngokuhlukana, kepha akusekho.
Eminye imichilo engenazandla icabanga ngayo yonke into. Futhi, lapho siphuma, sidinga ukuphatha izinto ezithile, njengokhiye, iselula noma imali ethile evulekile. Kepha, uma ungenawo amaphakethe, kuzofanele uphathe yonke into ngesandla sakho.
Ngenxa yalokho kukhona amamodeli aphindwe kabili njengamaphakethe we-fanny ukuze ukwazi ukufaka ezinye izinto. Isikhala sincane kakhulu, kepha sizokunikeza ukuthi uphathe okulungile futhi okudingekayo.
Uma uthanda ukuyogijima noma uhambe ubusuku bonke, kubalulekile ukuthi ibhande elingenazandla libe nezinto ezibonakalisayo ukuze abantu bazi ukuthi useduze futhi bakubone.
Ungayisebenzisa kanjani intambo engenazandla
Ucabanga ukuthenga umucu ongenazandla? Yebo, uyazi ukuthi kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Iningi labo linendandatho evulekayo ukuze ukwazi ukubeka ibhande okhalweni lwakho bese uyivala. Kumele livikele ukuze lingavuleki, kanjalo nokuthi ibambeke kahle okhalweni (uma kungenzeka ngaphandle kwemibimbi ezingutsheni noma ezifanayo ukuthi, uma zisetshenziswa, zingacasula).
Uma usulungise i-leash, kufanele nje ujoyine iketanga noma ibhande lokunwebeka nenja yakho (kukhola noma ihhanisi layo) futhi uzobe usukulungele ukuphuma nenja yakho ngaphandle kokuphatha leash ngesandla sakho.
Ungayithenga kuphi leash ukuze ugijime nenja
Manje njengoba wazi okuthe xaxa ngokusetshenziswa kwe-leash ukuze usebenze nenja, sekuyisikhathi sokukhetha enye yamamodeli amaningi ongayithola emakethe.
Uyacelwa ukuthi uqaphele lokho Ngeke ikusebenzele ukwenza i-canicross noma ukuzivocavoca okufanayo, kepha futhi kungaba ithuluzi lokuyikhipha usuku nosuku futhi ngaleyo ndlela izandla zakho zikhululeke (futhi zivikelwe kumajezi).
Amazon: Ingesinye sezitolo ezinkulu nokuthi uya kuphi thola imishini yezemidlalo yezinja zemikhiqizo ehlukene namanani. Imvamisa le micu engenazandla izokunikeza ukuthi uyivocavoce kepha akusho ukuthi awukwazi ukuyisebenzisela okunye ukusetshenziswa.
kiwiko: IKiwoko isitolo esikhethekile ezifuyweni. Kuwo unamamodeli athile wezinwele ezingenazandla zezinja, kepha kulinganiselwe kakhulu. Eqinisweni eziningi zithengiswa nge-canicross harness.
I-Decathlon: Lolu khetho mhlawumbe lungcono kakhulu ukuthola amamodeli athile alo mdlalo, noma ukusetshenziswa kwansuku zonke. Yize bengenakho ukukhetha okuningi, akungabazeki ukuthi i-leash engenazandla, kanye ne-canicross harness nezinye izesekeli zine ikhwalithi ehloniphekile futhi abaningi bayabancoma.
Ngabe ulinga ukuzama i-leash engenazandla ekuhambeni nsuku zonke noma ubhalisela ukuzivocavoca nenja yakho?
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Ibhande elingenazandla
UJulius K9 Harness